မျှဝေရန်ဒေတာ - နိုင်ငံတကာစာရေးစင်တာများအသင်း
ဤစာမျက်နှာသည် အရေးအသားစင်တာဒေတာမျှဝေခြင်းအတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။ သင့်ဒေတာအတွဲ သို့မဟုတ် သိုလှောင်ခန်းသို့ ကျွန်ုပ်တို့အား လင့်ခ်ချိတ်လိုပါက၊ ကျေးဇူးပြု၍ စာမျက်နှာ၏အောက်ခြေတွင် ဖောင်ဖြည့်ပါ။ သင့်စာတွင် ဒေတာအစုံ၊ ဝဘ်ဆိုက် သို့မဟုတ် ၎င်းကို ဝင်ရောက်နိုင်သည့် URL နှင့် ၎င်း၏ ခေါင်းစဉ်တို့ ပါဝင်ကြောင်း သေချာပါစေ။
Writing Center Session Note Data Repository Genie Giaimo၊ Christine Modey၊ Candace Hastings နှင့် Joseph Cheatle တို့သည် "စာရွက်စာတမ်းသိမ်းဆည်းခြင်းဖန်တီးခြင်း- 2018 IWCA ထောက်ပံ့ကြေးအတွက် ရရှိခဲ့သော XNUMX IWCA ထောက်ပံ့ကြေး- Session Notes၊ Intake Forms နှင့် အခြားသော Documents များ သည် ကျွန်ုပ်တို့အား စာရေးခြင်းလုပ်ငန်းအကြောင်း ပြောပြနိုင်သည် စင်တာများ။"
စာရေးဌာန Roots ပရောဂျက် Sue Mendelsohn က ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိ ထောင်နှင့်ချီသော စာရေးဌာနများနှင့် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည့် နှစ်များကို စာရင်းပြုစုထားသော စာရင်းဇယားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့် သင်၏စာရေးစင်တာကို စာရင်းဇယားတွင် ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ စာရေးစင်တာ စတင်တည်ထောင်သည့်ရက်စွဲပုံစံ.
စာရေးဌာန နှစ်ပတ်လည် ကျောင်းသား လည်ပတ်မှု အစီရင်ခံစာများ. ဤစာတမ်းတွင် နှစ်စဉ်လည်ပတ်မှုများအကြောင်း ရေးသားဖော်ပြသည့် စင်တာဒေတာသို့ လင့်ခ်များ ပါဝင်သည်။ ဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့် သင့်စာရေးဌာန၏ နှစ်စဉ်လည်ပတ်မှုများအကြောင်း ဒေတာကို ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ စာရေးဌာန နှစ်ပတ်လည် လည်ပတ်မှု အစီရင်ခံစာ ပုံစံ.
ပံ့ပိုးကူညီသူများ၏အမည် သို့မဟုတ် အမည်များ(လိုအပ်)
URL (အကြောင်းအရာကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည့်နေရာ)(လိုအပ်)